ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုကို ဒီအချက်၇ချက်နဲ့ အလွယ်တကူသင်ယူကြမယ် – Trend.com.mm
ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုကို သင်ယူဖို့ဆိုတာလွယ်လား?ဘယ်ဘာသာရပ်က သင်ယူဖို့အလွယ်ဆုံးလဲ?ဒါတွေက လူတိုင်းမေးချင်ကြတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပါ။ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်တွေအရ…အလွယ်ဆုံးဘာသာရပ်က စပိန်ဘာသာစကား ပါတဲ့။ပြောရတာလည်းလွယ်ကူပြီး ၀ါကျတွေစီရတာလည်းအရမ်းလွယ်ပါတယ်။ ဒုတိယအလွယ်ဆုံးက အီတလီစကားပါ။အီတလီစကားက ပြောရတာလည်းလွယ်ပြီး ၀ါကျစီရတာကလည်းလွယ်တယ်။တတိယကတော့ပြင်သစ်စကား။ပြင်သစ်စကားက နည်းနည်းတော့ခက်မယ်။အလယ်အလတ်ပေါ့။ပေါ်တူဂီကလည်း အလယ်အလတ်ပဲ။ ဂျာမန်ကျတော့ စကားပြောရတာအရမ်းခက်ခဲပါတယ်တဲ့။ဟင်ဒီစကားကတော့ အလယ်အလတ်ခက်ခဲတယ်လို့သိရပြီး တရုတ်ဘာသာစကားကတော့ သင်ယူရတာအရမ်းခက်တယ်လို့လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။
ဒါဆိုအင်္ဂလိပ်စကားက မပါဘူးလားလို့မေးစရာရှိပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စကားကတော့ နိုင်ငံတကာက လည်းသုံးနှုန်းပြောဆိုနေပြီး ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ငယ်ငယ်လေးကတည်း ကတွဲဖက်သင်ယူလာရတာ ဆိုတော့သိပ်မစိမ်းတဲ့အတွက်ဘာသာရပ်အသစ်ထဲမှာတော့မပါဝင်ဘူး လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စာနဲ့မြန်မာစာကတော့ အခြေခံဘာသာစကားလို့ တောင်ပြောနိုင်ပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံပဲသွားသွားအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် နားလည်တဲ့သူက ပိုပြီးများတယ်မဟုတ်လား?
ဒါဆို ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုကို ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူကြမလဲ? ဘာသာစကားအသစ်ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင် ဒီအချက် ၇ချက်ကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်။
ဂျာမန်ဘာသာပြန်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Judith Matz အကြံပေးချက်အရ ဘာသာစကားအသစ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စကားလုံး ၅၀ကိုယူထုတ်လိုက်ပါ။ပြီးရင် တခြားသူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါ သုံးကြည့်ပါ။ပြီးမှ ဂရမ်မာကိုဆက်ပြီးလေ့လာပါတဲ့။
အသက် ၂၇နှစ်အရွယ် အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့Elisabeth Buffard ရဲ့ လေ့လာချက်အရ ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်၊နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်၊အလုပ်များနေတဲ့အချိန်တွေမှာတောင် ကိုယ်အလွယ်တကူသင်ယူနိုင်တဲ့ဘာသာရပ်ကိုရှာပြီးအဲ့ဒီဘာသာရပ်ကိုဆက်ပြီးလေ့လာပါတဲ့။ဒါဆို ဘယ်ဘာသာကိုလေ့လာရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်ပြီပေါ့။
ရုရှားဘာသာပြန်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Olga Dmitrochenkova ရဲ့ လေ့လာချက်တစ်ခုအရ ဘာသာစကားအသစ်ကိုပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကျွမ်းကျင်ချင်တယ်ဆိုရင် နေ့တိုင်းသုံးပါတဲ့။ သူငယ်ချင်းနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်း ထည့်သွင်းပြောဆိုတာဖြစ်စေ၊သင့်ရဲ့ အိမ်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းမှန်သမျှကို အဲ့ဒီဘာသာစကားအသစ်နဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာရှာပြီး ကပ်ထားပါ။ ကိုယ်လေ့လာနေတဲ့ဘာသာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပါ။ဘာသာစကားအသစ်ကို ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံခြားသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လိုသဘောထားပြီးလေ့လာမယ် ဆိုရင်ပိုပြီးကျွမ်းကျင်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့။
ဒီအချက်တွေကတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။အွန်လိုင်းမှာဆိုရင် အားလုံးရှိသလောက်ပါပဲ။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့စာတွေ၊အသံဖိုင်တွေကို ဖုန်းထဲမှာထည့်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင် အချိန်မရွေးလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုကိုလေ့လာနေတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေ အုပ်စုဖွဲ့ပြီးဖြစ်စေအတွေ့အကြုံတွေဖလှယ်ပါ။ တစ်ယောက်တည်းလေ့လာတာထက် သူငယ်ချင်းတွေအတွေ့အကြုံဖလှယ်ကြတာ ပိုပြီးဗဟုသုတရနိုင်ပါတယ်။
ဘာသာစကားအသစ်ကိုသင်နေပြီဆိုရင် မပြောရဲသလို ၊အမှားအယွင်းဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကအားလုံးလိုလိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့ စိုးရိမ်စိတ်ကိုဖျောက်ပါ။အမှားလုပ်မိမှ ဘာမှားတာလဲဆိုတာသိပြီး ပြန်ပြင်ဆင်လေ့လာလို့ရမှာပါ။ဂျာမန်ဘာသာပြန်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Judith Matz က သူတစ်ခါက အီတလီကလေးငယ်လေးနဲ့စကားပြောကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ အီတလီဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဆင့်တူတူဖြစ်နေတာကို နားလည်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဓိကက ပြောရဲဆိုရဲဖြစ်နေမှအလွယ်တကူ နားလည် သင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အမှားအယွင်းဖြစ်မှာစိုးရိမ်နေရင် ၅နှစ်အောက်နိုင်ငံခြားက ကလေးငယ်လေးတွေနဲ့စကားစမြည်ပြောကြည့်ပါ။ပြီးတော့မှ ရွယ်တူတွေနဲ့စကားပြောဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။
Posted in Education, People & Planet